Puntland oo bilawday qorshe dareen-qaybsi ah oo ku aaddan dhib la wadaagidda dadka ay abaaruhu halakeeyeen. – Radio Daljir
Garowe, Aug 05 – Dawladda Puntland ayaa ku dhaqaaqday qorshayaal lagu abuurayo dareen-wadaagid walaaltinimo oo ka turjumaysa dhib la qaybsiga dadka barakacayaasha ah ee ku sugan Puntland ee eheladoodu ay la dhibaataysan yihiin mushkiladda abaareed ee ku dhufatay inta badan gobollada koonfureed ee Soomaaliya. Dalwladda ayaa dhinaca kalena sheegtay in ay kor u qaadday qaabilaadda iyo soo dhaweynta dadka abaaruhu soo sal-kiciyeen.
Wasaaradda arrimaha gudaha dawladaha hoose iyo horumarinta reer miyiga ee Puntland ayaa qabatay kulan ballaaran oo ku saabsana is dhex-galka bulshada qeybaheeda kala duwan, iyadoo kaalin lama illaawaan ahna arrintaasi ku siiyey dadka ku soo qaxay deggannaan ka jirta deegaannada Puntland.
Hal-ku-dhigga kulankaan oo ahaa la qaybsiga dareenka noolasha ee dadyowga ku nool dhammaanba deegaanada Puntland ayaa wasaaradda arimaha gudaha oo kaashanaysay hay’adda UNHCR waxay galinkii dambe ee shalay u qabatay bulshada qaybaheeda kala duwan oo ay ku jireen dad ka socday xeryaha barakacayaasha ee ku yaalla Garoowe iyo xubno ka tirsan golayaasha dawladda, halkaasoo wasaaraddu isla xalayna casumaado iyo casho-sharaf ugu diyaarisay ka qayb-galayaashii kulanka.
Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha, dawladdaha hoose iyo horumarinta Reer Miyiga Puntland Gen. C/llaahi Axmed Jaamac Ilko -Jiir oo kulanka daahfuray ayaa sheegay in Puntland ay la qayb-sanayso dareenkooda dadka barakacayaasha ah ee ku sugan Puntland ee ehelkooda iyo qaraabadoodu ay dhibaataysan yihiin koonfurta Soomaaliya halkaasi oo abaaro ba’an ku dhufteen.
Mudane Ilko-jiir waxuu si toos ah u amaanay dadka barakacaayaasha ee ku nool Puntland kuwaasi oo wasiirku ku tilmaamay in ay qayb weyn ku lahaayeen xuskii loo sameeyey sannad guuradii 13-aad ee kasoo wareegatay aas-aaska Puntland.
Dhinaca kale, wasiirka ayaa soo hadal-qaaday abaarta ka jirta inta badan koonfurta Soomaaliya, isagoo wasiirku sheegay in Puntland ay ka danqanayso dhibaatada dhinaca abaaraha ah ee ku habsatay dadka Soomaaliyeed, waxaana uu intaasi ku daray in uu socodo dadaal ballaaran oo ay iska kaashanayaan dawladda Puntland iyo shacabkeeda kuna aaddan wax u qabashada iyo la qaybsiga dareenka dhibka haysta walaalaha koonfureed.
Gadoomiyaha kaamamka barakacayaasha Garoowe Macallin Isaaq Xasan Cabsi, oo dhiniciisa ka hadlay kulankaan ayaa dawladda Puntland uga mahad-celiyay sida wacan ay u marti-galisay, waxaana dhinaca kale uu sheegay in ay markastaba nabad-galyada kala shaqeeyaan maamulka. Mudane Macallin Isaaq ayaa Puntland ku tilmaamay meel marti-galisa dhibanayaasha kasoo cararay colaadaha iyo xaaladaha kala duwan ee ka jira Soomaaliya inteeda kale.
Arrintaan ayaa waxa ay kasoo beegmaysa, iyadoo dhawaan madaxweynaha Puntland C/ Raxmaan Shiikh Maxamed Maxamuud Faroole uu ku baaqey in taageero buuxda loo fidiyo dadka kasoo carayay dhibaatada kataagan koonfurta Soomaaliya ee soo gaaraya Puntland.
C/ Wali Maxamed Sheikh